नेपाल आज | व्यक्तिगत वैरभाव हुनेलाई झापा विद्रोहका नाममा हत्या गरियो (भिडियोसहित) भाग ७
व्यक्तिगत वैरभाव हुनेलाई झापा विद्रोहका नाममा हत्या गरियो (भिडियोसहित) भाग ७
मङ्गलबार, २८ फागुन २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडौं । नेपालआजले शुरु गरेको इतिहास सम्बन्धी शृंखला ‘’ को पहिलो चरणमा इतिहास बिषयका प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ । केसीसँग नेपालआजले इतिहासका पाटाहरु केलाउने क्रममा सातौं भागसम्म आइसकेको छ । यो भागमा डा. केसीले इतिहासका पात्रहरुबारे चिरफार गर्नुभएको छ । प्रस्तोता हरिराम रिमालसँग डा. केसीले यो भागमा २०१७ सालपछिको इतिहासको चर्चा निम्नानुसार गर्नुभएको छः
‘७ सालमा जे परिवर्तन भयो, त्यो परिवर्तन संस्थागत हुँदै जान सकेन । नेताहरुको आचरण प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता बमोजिम भएनन् । राजसंस्थावादी शक्तिहरुले पनि दलबाट शक्ति खोस्न प्रयास गरिरहे । राजनीतिक दलहरुले सुझबुझ देखाउन सकेनन् । जसका कारण १७ सालको प्रकरण देखा परेको हो ।
१७ सालको कूमा राजा महेन्द्रकै महत्वकांक्षा महत्वपूर्ण थियो । विपीले ठूलो कमजोरी गरेका होइनन् । १७ सालको कदममा भारतको समर्थन थियो । विपी कोइरालाका लागि विश्व परिस्थिति अनुकुल थिएन ।
राजा महेन्द्रले ३० वर्ष पञ्चायत चलाए । दलहरुले पनि ३० वर्ष चलाइ सके । के फरक भयो ती यी दुई बीचमा ? कसले कति विकास गरेको छ ?
त्यो बेला कम्युनिष्ट पार्टीले आन्तरिक द्वन्द्वले शिर उठाउन सकेन । सामाजिक परिस्थिति पनि अनुकुल थिएन । नेपाली समाजमा कम्युनिष्ट विचारधारा भर्खर प्रवेश गरेको थियो । कम्युनष्टिलाई अछुत जस्तो व्यवहार गरिन्थ्यो ।
कोइराला परिवारमा पनि कम्युनिष्ट विरोधी भावना थियो । कोइराला परिवार कुर्सीमा बस्ने, बाँकी सबै प्रजा झै भुँईमा बस्ने सामन्ती प्रथा थियो । पदका लागि मातृका र विपी कोइराला दुवैमा लालच थियो ।
झापा विद्रोहका नाममा त्यहाँका बिमली, राजवंशी थरका मानिसहरुलाई सामन्ती भएको आरोपमा सिपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, केपी ओलीहरुले हत्या गरे । अनारमनीका एक पीडितले मलाई नै भने, ‘हाम्रा बुबाहरुलाई सामन्ती भनेर हत्या गरे । अहिले सिपी, आरके मैनालीका बिल्डिङ हाम्रो भन्दा ठूलो छ रे । आफैं सामन्ती हुन अरुको हत्या गरेका रहेछन् ।’
त्यो बेला सामन्ती मारेकै होइन रहेछ । जोसँग आफ्नो वैरभाव थियो, तिनैको हत्या गरेका रहेछन् ।
र याे पनि ।